अमेरिकी सेनामाथि आ*क्रमण गर्ने इरान कति शक्तिशाली ? – Nepali Update
अमेरिकी सेनामाथि आ*क्रमण गर्ने इरान कति शक्तिशाली ?
एजेन्सी– इरान अमेरिका तनाव निकै बढेको छ । अमेरिकाले इरानी कमाण्डर कासिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि बढेको इरान अमिरिका तनाव युद्धको अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।
इरानले इराकमा रहेको अमेरिकी सेनाको दुई अड्डामा एक दर्जन भन्दा धेरै मिसाइल हमला गरेपछि तनाव उच्च विन्दूमा पुगको हो । इरानको सरकारी मिडियाले यो हमला जनरल कासिम सुलेमानीको हत्याको बदलामा गरिएको जनाएको छ ।
यी हमला सुलेमानीको अन्त्येष्टि गरिएको केही घन्टा पछि नै भएको हो ।
इरानले हमला गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि क्ष्तिको समीक्षा गरिने भन्दै अहिलेसम्म सबै राम्रो हरेको बताउँदै‘हामीसँग विश्वको सबैन्दा शक्तिशाली सनो छ ।’ अमेरिकासँग विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सेना, जासूसी संयन्त्र, हतियारहरु रकेहो छ ।
यस्तै इरानी विदेशमन्त्री जव्वाद जरीफले यो हमला आत्मरक्षाका लागि गरिएको जनाएका छन् ।
कति शक्तिशाली छ इरानी सेना ?
इरानमा पाँच लाख २३ हजार सक्रिय सैन्य सेवामा भएको अनुमान गरिएको यूकेस्थित इन्टर्न्याश्नल इन्स्टिट्यूट फोर स्ट्रटीजिक स्टडीजले जनाएको छ ।
उक्त सङ्ख्यामा इरानी सेनाका साढे तीन लाख र इस्लामिक रेभलूशनरी गार्ड्स कोर ९आईआरजीसी० का कम्तीमा डेढ लाख जवान सम्मिलित छन् ।
आईआरजीसीको जलसेनामा थप २०,००० सैनिक छन्। जलसेनाले स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिने जलक्षेत्रमा गस्ती गर्छ।
गत वर्ष त्यहाँ तेल बोक्ने विदेशी ध्वजावाहक ट्याङ्करलाई इरानी पक्षले कारबाही गर्दा तनाव उत्पन्न भएको थियो। आन्तरिक विद्रोह दमन गर्न सघाउँदै आएको स्वयंसेवीहरूको एउटा एकाइमा पनि आईआरजीसीको नियन्त्रण छ।
उक्त समूहले हजारौँ सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्छ।
इरानमा इस्लामिक प्रणालीको रक्षा गर्न चार दशकअघि आईआरजीसीको गठन भएको थियो। त्यसयता उक्त समूह एउटा महत्त्वपूर्ण सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक बलको रूपमा स्थापित भएको छ।
सेनामा भन्दा कम जनशक्ति भए पनि आईआरजीसीलाई सबैभन्दा बढी अधिकार भएको सैन्य बल मानिन्छ।
इरानसँग क्षेप्यास्त्र रहेको छ ।
क्षेप्यास्त्र इरानको सैन्य शक्तिको अभिन्न अङ्ग हो । प्रतिद्वन्द्वी इजरायल र साउदी अरबको तुलनामा उसको वायुसेनाको क्षमता कमजोर भएकाले इरानका लागि क्षेप्यास्त्रको ठूलो सामरिक महत्त्व छ।
अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनमा इरानको क्षेप्यास्त्र क्षमतालाई मध्यपूर्वकै सबैभन्दा ठूलो भनेर उल्लेख गरिएको छ।
उससँग छोटो र मध्यम दूरीका क्षेप्यास्त्रको भण्डार छ। अमेरिकी प्रतिवेदनका अनुसार इरानले लामो दूरीका अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र विकास गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको पनि परीक्षण गरिरहेको छ।
सन् २०१५ मा अन्य देशसँग गरिएको पारमाणविक सम्झौताका कारण इरानले लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी कार्यक्रम रोकेको रोयल यूनाइटिड सर्भिसिज इन्स्टिट्यूट ९रुसी० ले जनाएको छ।
तर सम्झौतामा देखिएको अन्योलका कारण इरानले उक्त कार्यक्रम पछि पुनस् थालेको हुन सक्छ।
जे भए पनि साउदी अरब र खाडीक्षेत्रका धेरै स्थानमा र सम्भवतस् इजरेलमा पनि इरानी क्षेप्यास्त्र पुग्न सक्छन्।
वर्षौँदेखि नाकाबन्दी खेपेको भए पनि इरानसँग आधुनिक ड्रोनहरू छन्।
इस्लामिक स्टेट समूहसँग सन् २०१६ मा इराकमा सङ्घर्ष हुँदा इरानी ड्रोन प्रयोग गरिएको थियो।
रोयल यूनाइटिड सर्भिसिज इन्स्टिट्यूटका अनुसार इरानले सिरियाबाट आफ्ना अस्त्रयुक्त ड्रोन इजरेली हवाईक्षेत्रमा पनि पठाएको छ।
गत वर्ष जुन महिनामा अमेरिकाले जासुसी गर्न उडाएको एउटा ड्रोन इरानले खसालिदिएको थियो।
स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथि उड्दा उक्त ड्रोनले आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गरेको इरानको दाबी थियो ।